Orodka roodhida ah | February 2020
Miyaad ka maqashay dhirtii Chizhov? Waxaa laga yaabaa in aad ku raaxaysatay dhadhankiisa casiir leh iyo rabitaan ah in lagu beero geed geedka noocaas ah? Maqaalkeena waxaan ka fiirsan doonaa wax kasta oo loo baahan yahay tan. Qeexida midhaha (faa'iidooyinka, faa'iido darrada) Chizhovskaya pear-hybrid, bred by jinsiyadaha Ruush, kaas oo la helay by gudbinta laba nooc oo wanaagsan.
Pear Lada Dhamaan dadka ayaa rajeynaya guga, xagaaga, inay ku raaxaystaan ​​ma aha oo kaliya diirimaadka iyo maalmaha wanaagsan, laakiin sidoo kale inay ku dabbaaldegaan hadiyadaha dabiiciga ah. Dabcan, qof kastaa wuxuu doonayaa in uu si dhakhso ah u dhadhamo nooca ugu wanaagsan ee beerta miro iyo xirfadlayaal, iyo bannaanka u hiwaayadda u muuqdaan in ay helaan goosashada hore. Waxay ahayd ujeedo noocan oo kale ah in noocyada kala duwan ee laadku ay u muuqdaan kuwo aan sidaa u fogeyn.
Maanta, waxaan uga mahadcelinaynaa horumarka firfircoon ee taranta, wakiillada cusub ee dalagyada beeraha ayaa muuqda. Waayo, abuuristooda ayaa hore u isticmaala noocyo kala duwan. Noocyada cusub waxay hagaajiyaan dhadhanka, waxay hagaajinaysaa iska caabinta cudurada kala duwan. Mid ka mid ah noocyada asaasiga ah waa pear "Bergamot".
Qurxinta Pear Talgar
Qofka casriga ah, ee daryeesha caafimaadkiisa, waa in uu doorto nafaqada. Kiimiko wuxuu u baahan yahay in lagu daro cuntadaada sababtoo ah joogitaanka waxyaabo badan oo faa'iido leh oo ku jira qashir iyo maqaarka miraha. Waxaa jira noocyo badan oo ka mid ah warshadan miro, laakiin mid ka mid ah wakiillada ugu caansan ayaa weli ah noocyada kala duwan ee Talgar Beauty.
Maanta, qof kasta oo doonaya inuu abuuro beerkiisa gaarka ah uma baahna aqoon iyo xirfad gaar ah. Ka dib oo dhan, leh daryeel habboon, ku dhowaad dhammaan wakiilada dalagyada beerta soo saaraan dalagga wanaagsan oo deggan. Noocyo badan oo kala duwan oo geedo midho leh ayaa ku kori kara cimiladeena. Xitaa sida "waqooyiga" wakiilka sida pear Ussuri uu awood u leeyahay in uu xidid ku yeesho beerahayaga.
Xusuusta Xusuusta Yakovlev
Qof kasta oo jecel beerka ayaa isku dayaya in uu kordhiyo tirada dalagyada "nool" dhulkiisa. Sidaa darteed, xiisaha geedo midho leh ayaa si joogto ah u kordhaya. Hadda, ku dhowaad at kasta oo ka mid ah noocyada kala duwan ee geedaha tufaaxa, plomme, isteroberi, jeeriga iyo miraha kale iyo miraha beeraha.
Dad yar ayaan ku faraxsanayn xagaaga, qorraxda, miraha iyo khudaarta cusub. Ka dib oo dhan, tan iyo carruurnimada, mid kasta oo naga mid ah ayaa loo sheegay in midhaha beeraha ay aad u faa'iido u leedahay jirkeena. Miro ama qudaar kasta waxaa ku jira qayb ka mid ah fitamiinada iyo macdanta. Sidaa darteed, si buuxda uga soo kabashada jidhka ka dib qaboobaha qabowga iyo avitaminosis, waxaad u baahan tahay inaad ku soo bandhigto waxyaabahaas cuntooyinkaaga.
Iyadoo bilawga xagaaga, dadka ma aha oo kaliya dareen wanaagsan, laakiin sidoo kale fursad ay ku cunaan miraha iyo khudaarta cusub. Haddii aad leedahay beertaada ama dacha-ga, ka dibna waxaa jira fursad aad ku korto miraha iyo khudaarta isku mid ah. Maanta, waxaad ku kori kartaa wax kasta: laga bilaabo tufaaxa iyo isteroberi si aad u liidhiso.
Waxaa la ogyahay in nafaqada habboon ay qayb ka tahay "aasaas" ee caafimaadka aadanaha. Qeyb ka mid ah hab nololeedka caafimaadka leh waa isticmaalka miraha iyo khudaarta. Waxay ka timaadaa cuntooyinkaas oo qofku qaato walxaha loo yaqaanno fitamiin. Summer waa muddada ugu wanaagsan ee ubax iyo Bisaylkiisa ee midhaha geedo kala duwan iyo duurka.